सांसद नै भूमाफियाका समर्थक भएपछि हदबन्दी जग्गा जोगाइदिन ऐन ! spacekhabar
सांसद नै भूमाफियाका समर्थक भएपछि हदबन्दी जग्गा जोगाइदिन ऐन !
संशोधन गर्न लागिएको कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी र महँगो मूल्यका जग्गा बेचबिखन गरी त्यसको साटो कमसल र कम मूल्य पर्ने जग्गा किनेर देखाउन पाइनेछ। सरकारले तराईमा १० बिघा, उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी जग्गा हदबन्दी तोकेको छ। यस अतिरिक्त तराईमा १ बिघा, उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडमा ५ रोपनी जग्गा घरघडेरीका लागि प्रयोग पाउने व्यवस्था छ। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २६, २०७६, ०७:०१:००